महरालाई महिलाको म्यासेज : ‘तँ न माफीको लायक भइस्, न मायाको लायक’ (भिडियो सहित) - Run With Tech
त्यसको जवाफमा भने महिलाले भने ८ बजेर ३८ मिनेटमा जवाफ फर्काउँदै तेरो सकिने दिन आयो भनेकी छिन् । महिलाले महरालाई पठाएको अर्को म्यासेजमा सबैतिर तेरो र्‍युमर फैलाउँछु भन्दै म्यासेज पठाएकी छिन् ।
र, त्यसको लगत्तै उनले अर्को म्यासेज गरेकी छिन्, ‘तँ न माफीको लायक भइस्, न मायाको लायक ।’ महिलाको यही म्यासेजकाे अर्थ लगाउने हाे भने महरा र उनीबीच लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेको हुनसक्ने संकेत गरेकाे छ ।
कृष्ण बहादुर महराले रोसनीलाई के के गरे बल्ल खुल्यो यथार्थ,यिनै हुनसबै भन्दा पहिले सुचना पाउने नेता ! हेर्नुहोस (भिडियोसहित)
रवि लामिछाने लाईभमै भिडियो। हेर्नुहोला
लद्दाखमा भारत र चीनका सेनाबीच दिनभर तनाव, चीनले चाल्यो कडा कदम ! हेर्नुहोस (भिडियोसहित)
September 24, 2019 admin भिडियो
भर्खरै जनकपुरमा नेपाल प्रहरीको डरलाग्दो प्र’हार, २ जना भारतीय अप’राधी घट’नास्थलमै ढले ! हेर्नुहोस (भिडियोसहित)
September 27, 2019 admin भिडियो
अशोक दर्जीको मन बिनाको धन ठुलो २ “बा आमा” सार्वजनिक ( भिडियो हेर्नुहोस )